के के हुँदैछ युएनए सम्मेलनको दुइ दिनमा ?? - Enepalese.com
के के हुँदैछ युएनए सम्मेलनको दुइ दिनमा ??
इनेप्लिज २०७४ जेठ ९ गते २२:१८ मा प्रकाशित
यो सम्मेलनको पहिलो दिन हो । दिउसो करिब ११ बजेदेखि उद्घाटन समारोह शुरु हुनेछ। उद्घाटन समारोहका संयोजक प्रमेश श्रेष्ठका अनुसार उक्त अबसरमा बिभिन्न झाँकीहरु प्रस्तुत गरिनुको साथै हाम्रो परम्परागत नाच समेत प्रस्तुत गरिनेछ। प्रमुख अतिथि र बिशेष अतिथिलाई खादा ओढाएर युएनएका अध्यक्ष पासांग लामाले स्वागत गर्नुहुनेछ। उद्घाटन समारोहमा बिशेष अतिथिको रुपमा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का रहनु हुनेछ। भब्य उद्घाटन समारोह पछि बिभिन्न फोरमहरु संचालन गरिनेछ। सामाजिक संस्थाहरुसंगको अन्तरक्रियात्मक फोरम पत्रकार केदार तिम्सिनाले गर्नु हुनेछ। लायन्स फोरम पनि त्यहाँ संचालन हुनेछ । फेसन सेमिनार रायन कार्कीको संयोजकत्वमा हुनेछ। त्यस्तै UNCON को स्वयंसेवी फोरम बटुक बिस्टको नेतृत्वमा संचालन गरिनेछ। उद्घाटन समारोह पछिको मुख्य कार्यक्रम युएनए दोश्रो सम्मेलन आयोजक समितिका मुख्य संयोजक बिएन पन्तले गर्नु हुनेछ।
मे २८, आइतबार।
सम्मेलनको यो अन्तिम दिन हो। यो दिनभर पनि धेरै कार्यक्रमहरु हुँदैछन्। युनाइटेड नेवा युएसए, युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन, डालस एभरेस्ट लायन्स क्लबको रक्तदान कार्यक्रम, सकारात्मक सोंचको शक्ति बिषयमा कार्यशाला, प्राकृतिक ध्यान र मानिसको मेकानिज्म जस्ताको तस्तै जस्ता फोरमहरु संचालन हुँदैछन। पूर्ण जानकारी युएनए कन्भेन्सन डट ओआरजी मा गएर हेर्न सकिन्छ। आइतबार यी सबै जानकारीमुलक र जिबनोपयोगी कर्यक्रम पश्चात लोकप्रिय लोक गायक हेमन्त रानाको साथमा बृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ। त्यसपछि सदा झैं डिजे नाइट सम्पन्न हुनेछ। दुइ दिनका यी घनिभूत कार्यक्रम सहित युएनएको सम्मेलन सम्पति हुनेछ। यसबाट नेपाली युवा र नेपाली समाजमा नयाँ उर्जा सिर्जना हुने आशा आयोजकले ब्यक्त गरेका छन्।